Abali iri na otu agaala ma Buhari emebeghi nhọpụta ọ bụla | odumblog
Abali iri na otu agaala ma Buhari emebeghi nhọpụta ọ bụla
posted on Jun. 15, 2019 at 10:36 pm
Onyeisi ala Muhammadu Buhari ekwuputabeghi nhọpụta ọ bụla kemgbe abalị iri na otu ọ ṅụrụ iyi ọchịchị. Buhari mechiri ọchịchị nke mbu ya na ụbọchị iri abụọ na itolu nke ọnwa May ma bidokwa nke ọhụrụ. N’ọchịchị ọhụrụ a, agbasala ndi ahọpụtara n’ọchịchị ochie.
Ọ bụ eziokwu na Buhari kwere nkwa ime ka ihe di iche bata na gọọmenti nke a, o nwebeghi ihe o mere doro anya kemgbe o bidoro ọchịchị ọhụrụ a. Agwa nke ọ na-egosi bụ nke na ogbasaghi ya.
N’afọ 2015 mgbe Buhari banyere ọchịchị nke mbu, nsogbu enwegasiri gụnyere: enweghi ọrụ, nsogbu enweghi nchekwa na ihe ndi eji enyere ndu aka. Mana Buhari chere ọnwa isii tụpụ ọ họpụta ndi ha na ya soro rụ ọrụ. Nke a so n’ ihe butere nlaghachi azụ n’akụnụba nke obodo a n’ọnwa Ọgọstụ, 2016.
Tụmadị nkwa Buhari kwere, ọ họpụtabeghi ndi mmadu dika odee akwụkwọ gọọmentị etiti, onyeisi oche ndi nchekwa obodo na ndi ọzọ. Onye ome iwu nke aha ya bụ Inibehe Effiong kwuru n’abalị Satọọdee na ụdị oge a Buhari na-egbu ga-ebute ihe jọkarisiri udele na njo.
Effiong sịrị na ihe kwesịrị ka emee ugbu a bụ ka onyeisi ala depụta aha ndi ọ họpụtara ka enwe ike bido ọrụ ngwa ngwa.
Tags:BuhariChannelsIgbo blogIgbo NewsMinisterNigeriaOdumblogSahara Reporters
odumblog June 15, 2019
Mahadum Nigeria Nsukka; VC Igwe
Imo bomb blast: Gọọmenti akasiela ndi ọnwụ metụtara obi
Odum Blog1 week ago